बेलायतमा पहिलोपटक बिरामीलाई कोरोना भ्याक्सिन दिएपछि जागेको आशा - Cherwant Khabar
Read Time:8 मिनेट, 47 सेकेन्ड
युरोपमै पहिलो पटक बेलायतले अक्सफोर्डमा बिरामीलाई कारोना भाइरसविरुद्ध भ्याक्सिन दिएको छ। दुईजना स्वयंसेवकलाई भ्याक्सिन दिइएको हो। यसले कस्तो असर पर्छ भन्ने हेर्न सुरुआती चरणमा ८ सय जनालाई भ्याक्सिन दिने तयारी गरिएको छ।
यिनीहरुमध्ये आधालाई कोभिड–१९ भ्याक्सिन दिइनेछ भने आधालाई मेनिन्जाइटिसबाट रोक्ने भ्याक्सिन दिइनेछ। यसरी भ्याक्सिन दिँदा कुन व्यक्तिलाई कुन भ्याक्सिन दिइएको भन्ने केवल डाक्टरलाई मात्र थाहा हुन्छ, लिने व्यक्तिलाई यसको पत्तो हुँदैन।
यसले काम गरे या नगरेको कसरी थाहा हुन्छ ?
अक्सफोर्ड टिमले अफ्रिकाको केन्या, जहाँ कोरोना संक्रमण दर ज्यादै कम छ, मा भ्याक्सिन ट्रायल गर्नेबारे सोचिरहेको छ।
यदि संख्या नै समस्या हुने हो भने कोरोना भाइरसले स्वयंसेवकलाई देखिने गरी संक्रमण गर्दैनरु
आगामी महिनामा ट्रायल गरिएका स्वयंसेवकलाई एकदमै सावधानीसाथ अनुगमन गरिनेछ। उनीहरुलाई भ्याक्सिन लगाएको पहिलो साताको केही दिन पाखुरा दुख्ने, ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने आदि समस्या हुन्छ भनी भनिएको छ।यो भाइरसले कोरोना भाइरसलाई गम्भीर प्रतिक्रिया दिनसक्ने सैद्धान्तिक जोखिम रहेकोबारेमा पनि जानकारी दिइएको छ, जुन सार्स एनिमल भ्याक्सिन अध्ययन गर्दा देखिएको थियो।
यो भ्याक्सिन कसलाई सुरुमा दिइन्छ ?
यसमा थप्दै प्राध्यापक पोलार्डले भने–जसलाई भ्याक्सिनको अत्यन्त जरुरत छ, तिनीहरुका लागि भ्याक्सिनको डोज पर्याप्त हुनेछ। यो भ्याक्सिन खाली बेलायतको लागि मात्र होइन, अन्य विकासशील देशका लागि पनि हो।
लन्डनस्थित इम्पेरियल कलेजको अर्को टिमले पनि जुनमा कोरोना भाइरस भ्याक्सिनलाई आगामी जुनमा मानिसमाथि परीक्षण गर्दै छ।
अक्सफोर्ड र इम्पिेरियल टिमले सरकारबाट ४० मिलियन पाउन्ड फन्ड पाएका छन्। बीबीसी